Facebook Advertising Services - AdvertisingMyanmar.com
☎ 09 979 300 900 ★ http://advertisingmyanmar.com ► ad mar ► Facebook Advertising Services
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ Facebook သုံးတဲ့သူ ၁၆ သန်းကျော် ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက Facebook သုံးသူတွေဆီရောက်အောင် ကြော်ငြာပေးနိုင် ပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေထဲမှာ မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အကြိုက်ဆုံး ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့- (၁) Facebook Page Likes တိုးအောင် လုပ်တာ၊ (၂) Facebook ပေါ် တင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို လူပိုသိအောင် လုပ်တဲ့ Boost Post လုပ်တာ၊ (၃) မိမိ ကိုယ်ပိုင် ဝဗ်ဆိုက်ဆီကို လူလာအောင် ကြော်ငြာတာ နဲ့၊ (၄) Customer engagement Facebooking တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာ အပြင် Messenger ထဲမှာပါ ကြော်ငြာ ပေါ်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို သိချင်ရင် အပေါ်က ပုံကို ထိကြည့်လိုက်ပါ။
Facebook advertising such as boosting, page likes, and PPC web site links are most demanded advertising services in Myanmar, although there are totally 11 different ways of advertising on Facebook. We will provide live reports, daily or weekly reports to monitor your ad projects. We cover advertising in Facebook and other social media marketing too.
(၁) Facebook Page Like Promote
လူကြီးမင်းရဲ့ ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာကို လူအသိများလာအောင်၊ လူလာကြည့်တာ များလာအောင်၊ LIKE အများကြီး ရလာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ကြော်ငြာနည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က LIKE နှိပ်လိုက်ရင် သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုလည်း၊ ဒီလူက သင့်စာမျက်နှာကို LIKE/ ကြိုက်တယ်လို့ ပြောတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း သွားပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ တစ်ခါ လိုက်ပြီးသွားရင် ဒီဖောက်သည် တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်နဲ့ အမြဲအတူ ရှိသွားမှာ ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ နောက်နောင် သင် Facebook ပေါ် တင်သမျှကို Like လုပ်ထားတဲ့ လူတွေကိုအမြဲ သွားသွား ပြပေးနေမှာပါ။ သင့်မီဒီယာကို subscribe လုပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွား ပါတယ်။
Facebook သို့ တိုက်ရိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကုန်ကျစရိတ် တစ်လ US $100 (မည်မျှ သုံးသည်/ ကျန်သည် ကို လူကြီးမင်းတို့က တိုက်ရိုက် မြင်နေရပါမည်။)
၀န်ဆောင်ခ ၅၀၀၀၀ ကျပ်
ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း ကာလ။ အများဆုံး ၃ လ အတွင်း သုံးပေးရပါမည်။
တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး $5 ဖိုး x အများဆုံး အကြိမ်ရေ ( 20 ) Boost ပြုလုပ်ပေးပါမည် ။
တစ်ကြိမ် ဝယ်ယူထားသူ အနေဖြင့် အများဆုံး ၁ နှစ်အတွင်း အသုံးပြုရပါမည်။
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မှုတည်ပြီး Like ပိုမိုရရှိစေရန် ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသော customer များ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
(၂) Facebook Post Boost Promote
လူကြီးမင်းတို့၏ Facebook Post ကို Boost ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Like Share နှင့် Comment များစွာရရှိနိုင်ခြင်းဖြင့် ဖေ့ဘုတ်အသုံးပြုသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်စေပြီး Customer အသစ်များ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ Post Boost မှ တဆင့် ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအပေါ် အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။ Page အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း၊ အချိန်ကာလပေါ်မှုတည်ပြီး Promotion ပြုလုပ်လိုပါက Post Boost Promote ပြုလုပ်ခြင်းကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Post Boost ပြုလုပ်ရာတွင် ရှင်းလင်း ထိရောက်သော စာသားများနှင့် မိမိတို့ လုပ်ငန်းအတွက် ရောင်းအားတက်စေမည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ပုံများ Design များကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
Facebook သို့ တိုက်ရိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကုန်ကျစရိတ် တစ်လ US $100 (မည်မျှ သုံးသည်/ ကျန်သည် ကို လူကြီးမင်းတို့က တိုက်ရိုက် မြင်နေရပါမည်။
· တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး $5 ဖိုး x အများဆုံး အကြိမ်ရေ ( 20 ) Boost ပြုလုပ်ပေးပါမည် ။
· တစ်ကြိမ် ဝယ်ယူထားသူ အနေဖြင့် အများဆုံး ၁ နှစ်အတွင်း အသုံးပြုရပါမည်။
· လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မှုတည်ပြီး Like, Share, Comments များ ပိုမိုရရှိစေရန် ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသော customer များ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်
(၃) Customer engagement Facebooking
· အခုခေတ်မှာ ဖေ့ဘုတ်က တစ်ဆင့် မိမိ ဖောက်သည်တွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့ ဆက်ဆံနေဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ကိုယ်တိုင် ရေးသားနေဘို့ အမြဲ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဒီဝန်ဆောင်မှုမျိုးကို ဝယ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဖောက်သည်တွေ သို့မဟုတ် ဖောက်သည် ဖြစ်လာနိုင်သူတွေနဲ့ အထိအတွေ့ အမြဲ ဆက်သွယ်မှု ရှိစေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
· နောက်ပြီး ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာတွေကို လူအတော်များများက စနစ်တကျ လုပ်ထားလေ့ မရှိပါဘူး။ သတင်း အချက်အလက်တွေ မပြည့်စုံတာတွေ ပုံတွေက အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တာတွေကို ပထမဆုံး ပြင်ပေးရလေ့ ရှိတဲ့အပြင် တစ်ပတ်တစ်ခါဆိုသလို အချိန်မှန်မှန် သင့်လုပ်ငန်း ကောင်းကြောင်း ရေးပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
· Social media marketing နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လုပ်ငန်းရှင် လူကြီးမင်းကို အမြဲ consultation / အကြံပေးတာမျိုး ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ကြော်ငြာမှုပုံစံပေါ်မှုတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
· လူကြီးမင်း လုပ်ငန်း အကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တစ်ခုခု ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ (တစ်လ ၄ ကြိမ်) စိတ်ဝင်စား စရာ ဖြစ်အောင် ရေးပေးပါမည်။
· Post ၁ ခုစီကို boost $5 x ၄ ကြိမ် promotion လုပ်ပေးပါမည်။
· မည်သည့် အကြောင်းအရာ ရေးသင့်သည်ကို လုပ်ငန်းရှင်က အချိန် ပေးနိုင်လျှင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါမည်။
· Fan page သို့ မေးခွန်းများ မေးလာလျှင် ၂၄ လုံးလုံး အလိုအလျှောက် နှုတ်ဆက် ကြိုဆိုသည့် auto-greeting message ပြန်ပေးအောင် ဆောင်ရွက် ပေးပါမည်။
· ပြန်ဖြေပေးရန် (လောလောဆယ်တွင်) တာဝန်ယူ ဝန်ဆောင်မှု မပေးသေးပါ။ လုပ်ငန်းရှင်၏ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦးက ဖြေကြား ပေးနိုင်ရန် စီစဉ် သင်ကြား ပေးပါမည်။
(Facebook က အမြဲ အသစ်တိုးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသဖြင့်၊ ယင်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးမြဲ ပေးနေမှသာ အထက်ပါ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်က သိရှိ နားလည်သည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။)
(၄) Link to Web Site or Facebook Page
မိမိကိုယ်ပိုင် web site ရှိသူများ ကြော်ငြာတဲ့ နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံကြော်ငြာ၊ စာကြော်ငြာ ကို ကလစ်လိုက်ရင် သင့် web site link ကို ရောက်သွားမှာပါ။ Facebook စာမျက်နှာ တစ်ခုမှာ လုပ်မရတာတွေ အများကြီး ကိုယ်ပိုင် web site မှာ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ website မှာ form ဖြည့်ခိုင်းတာမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ website ကို ကြော်ငြာချင်တာမျိုး တွေမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း ကာလ။ အများဆုံး ၃ လ
· Facebook user များကို လူကြီးမင်း လင့်နှင့် ပုံ+စာ အား ပြသကြော်ငြာ ပေးမည်။